Safal Khabar - भारतीय पूर्वराजदुत श्यामशरण एकाएक किन आए काठमाडौं ?
भारतीय पूर्वराजदुत श्यामशरण एकाएक किन आए काठमाडौं ?
राजनीतिक भेटघाट आजै गर्ने तयारी
सोमबार, ०२ मङि्सर २०७६, १० : २८
काठमाडौं । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको पार्टीभित्र कार्य विभाजनमा देखिएको समस्या, सरकार पूर्नगठन र भारतले कालापानी क्षेत्रमा गरेको अतिक्रमणको विरोधका बिच नेपालका लागि भारतीय पूर्वराजदुत श्यामशरण काठमाडौं आएका छन् । हिजो (आईतबार) ४ वजे काठमाडौं आईपुगेका श्यामशरण होटल म्यारियटमा वसेका छन् ।
नेपालमा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको पार्टीभित्र कार्यविभाजनमा देखिएको समस्या, सरकार पूर्नगठन, प्रधानमन्त्रीको स्वासथ्य उपचारको तयारी र भारतले कालापानी क्षेत्रमा अतिक्रमण गरेको नेपालको भूमिका विषयमा देशभित्र शुरु भएको विरोधका बिच शरण नेपाल आईपुगेका हुन् ।
होटल ¥याडिसनमा सोमबार आयोजना हुने पूर्न निर्माणसँग सम्बन्धित एक कार्यक्रमका लागि नेपाल आएको भनिएपनि एकाएक आगमनको भित्री रहस्य अन्य विषय नै रहेको स्रोतको जिकिर छ ।
इन्डिको एयरलाइन्सबाट काठमाडौं उत्रेका उनी हिजो सिधै आफु बस्ने होटल म्यारियटमा पुगेका थिए । यस अघि उनी काठमाडौं आउँदा प्रायः ¥याडिसन होटलमा बस्दै आएका थिए । भारतको विदेश सचिवका रुपमा समेत काम गरिसकेका श्यामशरण भारतीय सस्थापन पक्षको दुतका रुपमा नेपाल आएको चर्चा चलेसँगै उनले प्रधानमन्त्री केपी ओली, नेकपा अध्यक्ष प्रचण्ड, काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा सम्मलाई भेटने कार्यक्रम रहेको श्रोतको भनाई छ ।
नेपालको भारतसँग चिसिन खोजेको सम्बन्ध र उत्तर छिमेकी मुलुक चीनसँगको बढ्दो सम्बन्धका कारण भारतिय पक्षको निर्देशनमा शरणको नेपाल आगमन भएको हुन सक्ने औंल्याईएको छ ।
भारतले श्यामशरणलाई दुत बनाएर पठाएको हुन सक्ने अनुमान नेपाली राजनीतिक वृत्तमा लगाउन थालिएको छ । कालापानी क्षेत्रको विवाद भारतीय पक्षले परराष्ट सचिव स्तरमा छलफल गरेर टुंगो लगाउन चाहिरहेको छ । तर नेपालमा भने यो विषय प्रधानमन्त्री स्तरमै कुटनीतिक वार्ता मार्फत टुग्याउनु पर्ने राजनीतिक तहमा तिव्र दवाव छ ।
यति बेला श्यामशरण किन आए ? उनले ल्याएको भारतीय सन्दश के छ ? भन्नेमा अहिले राजनीतिक क्षेत्रमा निक्कै चासोका साथ हेरिएको छ । पुर्वराजदुत श्यामशरण आफनो नेपाल भ्रमण औपचारिक कार्यक्रमका लागि मात्र भएको देखाउन खोजेपनि भ्रमणको कार्यतालिका सार्वजनिकसँगै राजनीतिक भेटघाट नै रहेको देखिएको छ ।
उनी राजनीतिक भेटघाट आजै गर्ने तयारीमा छन् । मधेसी दलका केही नेताहरुसँग भने उनले हिजै (आईतबार) भेटघाट गरिसकेको बताईएको छ । भोलि साँझ मात्र उनी दिल्ली फर्किने कार्यक्रम रहेको बताईएको छ ।